Amerindians & Aborigines waxay rumaysteen deeqsinimada colonizer-ka waxaanan aqbalnay busteyaalkii lasiiyay. Maanta, waxaan bixinaa tallaalo kahortaga coro ... Akhri wax dheeraad ah
Qaab dhismeedka ka kooban labada danaha Mareykanka, Faransiiska, Ingiriiska, Biljamka iyo Yurub. Wadamadan, oo mar xukumaayay Madow / Afrikaanka, waxay dhiseen xaalad kacsan ... Akhri wax dheeraad ah
Taariikhda si loo tijaabiyo gabadhnimadooda ?? Si kastaba ha noqotee! Mid ma dhalan nin, midna wuxuu noqonayaa mid. Xoognimada ninna lama siinayo bilowga labadaba. Akhri wax dheeraad ah
Dadka Melanesian waxay ku nool yihiin gobol ku yaal woqooyiga Australia, Papua New Guinea. Falanqaynta DNA-da ayaa si lama filaan ah uga dhigtay bulshada cilmiga leh ... Akhri wax dheeraad ah